26 / 08 / 2019 - RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 26, 2019
Nidaamka Amniga Cimilada Ku Saleysan Radar ee gegada diyaaradaha Antalya
Hüseyin Keskin, Agaasimaha Guud ee Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMİ) iyo Gudoomiyaha Gudiga Agaasinka ayaa shaaca ka qaaday in Nidaamka Amniga Cimrada Rar ku saleysan ee Radar lagu dejiyay garoonka diyaaradaha Antalya. La wadaag akoonka rasmiga ah ee Twitter (@dhmihkeskin) [More ...]
Nidaamka Bixinta Terminalka Baska ee Kocaeli Cusboonaysiinta Baska Cusboonaysiinta
Gaadiidka, oo ah mid ka mid ah kuxirnaashaha Degmooyinka Magaalada Kocaeli, wuxuu wejigiisa ka dhigtay labada muwaadin iyo ganacsatada is-weydaarsiga wax cusub oo ay sameeyeen ilaa maalintii ay la wareegeen Terminal-ka Kocaeli Intercity Bus Terminal. Ugu dambayntiina, haddii ay dhacdo roobab mahiigaan ah, daadad ku dhaca garoonka [More ...]
Antalya Metropolitan Municipal 19 Waxay Gaadhay Kumanaan Dad Ah Oo Dib Ugu Laabtay Plateau
Muwaadiniintu waxay muujinayaan xiisaha weyn ee adeegyada basaska ee ay abaabusho Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya iyada oo halku dhigga 'Highland Time' kaas oo gacan ka geysanaya dalxiiska plateau. Wadarta 19 kun ee 555 dadku waxay u dhaqaaqeen isha biyaha xagaagan. Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Asphalt Moros in Toroslar oo ka socda Mersin
Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa shaqadeeda dammaanad qaadista dhammaan degmooyinka isku waqti oo ay ka mid tahay Degmada Toroslar. Intii lagu jiray bilaha xagaaga, muwaadiniintu waxay u isticmaali jireen sidii dhulka buuraleyda ah ee loo jecel yahay inay miyir qabtaan [More ...]
Duqa Magaalada Büyükkılıç wuxuu baaraa Derevenk Viaduct iyo Wadooyinka Iskuxirka
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu baarey shaqooyinka Derevenk Viaduct iyo wadooyinka isku xira, kuwaas oo noqon doona midka ugu muhiimsan wadooyinka kale ee magaalada. Madaxweyne Büyükkılıç, viaduct iyo jidadka iskuxirka 29 [More ...]
Dakhliga Gebze Metro ma noqon doonaa Wasaaradda?
Gudiga Warshadaha ee CHP Sözcüs, Kocaeli xigeenka Tahsin Tarhan, kuwaas oo qaadeen Wasaaradda Metro Gebze ayaa sheegay in suuqa kala iibsiga ee dhismaha Grand National Assembly ee Turkey si ay ajandaha ee CHP Guddiga Barlamaanka ee Warshadaha SözcüSu, Kuxigeenka Kocaeli [More ...]
KAYBİS, Isagoo raacaya Badhasaabkii
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu ka soo qeybgalay shirkii Wadatashiga iyo Qiimeynta Golayaasha Dowladaha Hoose oo lagu qabtay Nevşehir. Mehmet Özhaseki, gudoomiye ku xigeenka AK Party ee Dowladaha Hoose, ayaa sidoo kale ka qeybgalay kulanka. [More ...]
Qiime-dhimista 50 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Xarunta Iskuxirka Iskuxirka Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Kayseri (UKOME), ayaa la go'aamiyay khidmadda khidmadaha gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka. Khidmadaha gaadiidka dadweynaha taas oo aan wax isbeddel ah lagu sameynin muddo laba sano ah waxay ka ansaxan yihiin 26 Agoosto 2019 [More ...]
Wadada Başiskele İstiklal Street waa la dayactirayaa
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dayactirka wadooyinka iyo howlaha dayactirka ee magaalada. Xaaladda guud, degmada Başiskele ee Doğantepe Neighborhood İstiklal Street waxaa dib u habeyn lagu sameynayaa iyada oo la adeegsanayo howlo dhaqan-gal ah. Hawlaha ay qabato Waaxda Sayniska [More ...]
Waxay u shaqeysaa Gaadiidka Isbitaalka Magaalada Bursa
Shaqooyinka kulul ee loo yaqaan 'asphalt kulul' ayaa lagu dhammeeyay qaybta mitirka 3 ee ka bixitaanka 3 900 wadada imaatinkeeda kaas oo ay dhistay Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa ee loogu talagalay gaadiid qafilan oo loo qaado Isbitaalka Magaalada. Goobta guud, ilmaha dhalashada dumarka, wadnaha [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka ayaa ku dhawaaqday '45 Waxay Leedahay Mashaariic Horumar Leh Muddo Sanado Ah'
Sida ku xusan barnaamijka maalgashiga ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, miisaaniyadda mashaariicda la qorsheeyay in la dhiso sanadkan lama qoondeyn. Barnaamijka, 45 sano oo mashruuc soconaya oo la doonayo in la xuso. Barnaamijka maalgashiga ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, [More ...]
Shaqaalaha Railway Turkey (Tareennada-Business) Midowga General Ergun Atalay ayaa dib loogu doortay in Madaxtooyada. 11 waxaa lagu qabtay hoteel ku yaal Söğütözü. Furitaankii shirkii caadiga ahaa ee maalintii ugu dambeysay, Atalay wuxuu caddeeyey inuusan isagu ahayn musharrax u tartamaya lahadalka ergooyinka. [More ...]
Waxay ka shaqeysaa Trabzon Kanuni Boulevard
Wasiir Turhan, khudbadiisii ​​khudbaddii xafladda furitaanka ee lagu qabtay aagga Trabzon Atat withrk isagoo sharafta madaxweynahayaga Erdoğan ka helay, wuxuu u rajeeyay naxariistii uu u hayey sarkaalkii booliiska ee Akın Çelebi, oo gaadhay heer shahiidnimo, isla markaana u rajeeyay qoyskiisa samir iyo tacsi. [More ...]
Shirkadda Turkiga ah ee ugu weyn ee Qaramada Midoobay Garacad ee magaalada Garacad ee gobalka, maraakiibta Yurub iyo logistics brand dfds'y Rafaa bilowga ah ee geedi socodka isbedelka, keenay Rafaa DFDS ah magaalada Garacad ee gobalka Maraakiib badan oo dalka Turkiga. Markab weyn oo dhererkiisu yahay 237, [More ...]
Shaqaalaha Dhismaha Magaalada mitir ee Magaalada Istanbul waxay u sheegaan: Mushaarku waa mid aan caadi aheyn, Cunnadu waa Kurtlu